Izandla ngomxholo weAmbluni ngezandla zabo kwi-kindergart kunye nesikolo sezinto zendalo kunye neeplastiki, iiklasi zeklasi kunye nesithombe
Izandla ngomxholo othi "I-autumn" kunye nezandla zabo ezikolweni nasezikhunjini. Iiklasi zeengcali zezinto zobugcisa kunye neeplastiki
Abantwana - nazo zateyniki! Ngaliphi na ixesha lonyaka baya kufumana izinto ezithandekayo ukuthanda kwabo. Ebusika, abantwana banqumla iinqabana zeqhwa, benze imithi yemilwane kunye neenqwelomoya, benze isicelo se-Snowman kunye neSanta Claus. Ngentwasahlobo - ukukhetha kunye nokomisa i-primroses, yenza izimbali ezinobumba bokuqala obumnyama okanye obuhlaza. Ehlobo, abantwana bayavuya ukugcina iigobolondo namatye olwandle. Kwaye ekwindla - zihamba nazo zonke iindidi zezinto zemvelo ezahlukileyo ukuze zizisebenzise kamva ngezandla zabo kwiingcweti zezingane. Ixesha "lokuvuna" legolide lizalisa iitafile kunye namashalofu abancinci abancinci ngezinto ezininzi ezingenakucingeka: iigon, i-acorns, i-chestnuts, amaqabunga, izikhwelo, i-chestnuts, iintsiba, amaqabunga kunye neengcezu ze-bark kunye ne-moss ezomileyo. Ubuncwane obunjalo bubulungele ekwenzeni izenzi kwi-intanethi "I-autumn" ngezandla zakho zesikolo kunye ne-kindergarten. Yaye ukuba ubahlanganisela kunye nemifuno, ama-nut, iplastiki kunye nephepha elimbala-ufumana ukwakheka kwangempela kwekwindla kunye nebali elipheleleyo kunye nabalingiswa abahlekisayo. Iiklasi zeenkcukacha eziphambili zijonga phambili!
Indlela yokwenza inqaku elithi "I-autumn" ngezandla zakho esikolweni
Yeka indlela enhle ngayo ihlabathi elisijikelezayo! Akunakwenzeka ukuba ungabonakali ubuhle obuhle bemagqabi ekwindlaphu, iziqhamo ezinqabileyo zeziqhamo kunye namajikijolo, iintlobo ezimnandi zeentyantyambo ezinokugqibela, umbala omangalisayo wamabhobhofuthi kunye neentaka zeentaka, iintlobo ezingaqhelekanga zamagqabhoko kunye neebhokhwe. Yonke le mimangaliso ayibonakali kuphela, ichitha ixesha esifubeni semvelo, kodwa isetyenziselwe injongo encedo. Ngokomzekelo, ekwakhiweni kwendlu yangaphakathi kunye nezandla zabo okanye ukudala amanqaku anamandla ayenziwe ngesandla kwizinto zemvelo kwinkampani enezingane. Kodwa njani ukwenza amanqaku ayenziwe ngesandla ngomxholo othi "I-autumn" yesikolo? Ungakhetha njani ibali elincamisayo kwimveliso? Liza kuthatha ixesha elingakanani kunye nezinto eziza kubakho ukudala udidi oluncinane? Ukuba ngaphambi kokuba ungenayo ukwenza i-autumn craft kunye nomntwana wesikolo, qi niqiniseke ukuba ufunde isiluleko sethu kunye nesibindi senze inkqubo enomdla!
Ukwakha imveliso emihle eyenziwe ngezinto eziphathekayo kwimixholo yeAllum ezi zinto zilandelayo zincedo:
Iigobolondo ze-Walnut - ukulinganisa iindawo zomzimba zezilwanyana okanye iinqayi zefungi;
ii-fir cones - ukudala abalinganiswa abamangalisayo kunye nezinto zokubhabisa;
amajikijolo omisiwe - njengezinto ezilungileyo zeengqungquthela zekwindla;
i-florets eyomileyo kunye namagqabi - kwizicelo, iphepha lodonga, i-litter kwi-composition enkulu, njl.;
utshani - ukudala izinto ze-wicker;
i-chestnuts, i-acorns, i-nut isetyenziswe kwiindawo ezahlukeneyo zomzimba wabantu, izilwanyana kunye nabalinganiswa bee-fairy;
ama-eggshells, ibhakethi yomthi, i-moss-ngokunikela ngesandla ngesandla sibheke kwindlalelo yemvelo yendalo;
amasebe kunye neentonga - "ukwakha" iindawo, amaqula, i-stupa ye-witch, njl.;
imifuno, imbewu yezityalo, imbewu yelanga kunye nommbila, iipayi, iimbotyi;
Ukongeza kwizinto eziphathekayo, uzakufuna izixhobo kunye nezinto ezongezelelweyo zeeofisi: udongwe, iglue, ummese, iisisi, ipenseli, iphepha lemibala, amakhadibhodi, ipaperclips, izikhonkwane, iintambo, umlawuli. Inqaku elincinci labantwana elenziwe ngesandla, njengomthetho, lithatha ngaphezu kwemizuzu engama-30-40. Ukubunjwa kohlobo lwe-fairytale kunye namanani amaninzi kunye neenkcukacha ezincinci - ukusuka kwiiyure ezingama-2 ukuya kwiintsuku ezimbini, kuxhomekeke kwinqanaba leenkomfa zeklasi!
Isandla esenziwe kwimpahla yendalo kwimxholo "I-autumn" yesikolo: iklasi yeklasi kunye nesithombe
Imveliso eyenziwe ngezinto eziphathekayo kwimixholo ethi "I-autumn" - umsebenzi obalaseleyo, abantwana abathandekayo ixesha elide. Ekuqaleni, abantwana abanomdla wokwenene baqokelela izipho zehlathi: amaqabunga, ama-acorns, ama-chestnuts, amahlumela kunye namacwecwe. Emva koko, emva kokuqokelela yonke ingcinga yakho, wenza ibali lakho malunga nobuncwane bobutyebi bwindla. Kwaye emva koko, phantsi kolawulo oluqinileyo lwabazali, baqala ukwenza ngezandla zabo umenzi wemilingo kwiklasi yeklasi kunye nesithombe.
Izinto eziphathekayo kwiklasi yeklasi yezandla zesikolo ezenziwe ngezinto eziphathekayo kwimixholo ethi "I-autumn"
ukumboza kwibhokisi yebhokisi ebanzi
amaqabunga amancinci athile
amaqabunga anomileyo wemithi - amaqhosha ama-10-12.
amaqabunga amaninzi - 3-4 amaqhosha.
iisoni ze-spruce-2 ii-pcs.
isebe - 2 ii-pcs.
i-walnut - 1 pc.
ama-chestnuts 3-5 ama-pcs.
iphepha elimnyama (obomdaka, obomvu, oonon, ohlaza)
iisisi kunye nomsi
uboya obomvu obomvu obomvu
Umyalelo wesinyathelo-nge-nyathelo kwiklasi yeklasi yezandla zekwindla ezenziwe ngezinto eziphathekayo ngezandla zabo
Lungisa isiseko solu hlobo: flip isikhokhelo kwibhokisi yeesanti kwaye ubambe ngaphakathi kwiphepha elibomvu okanye eliluhlaza. Kuya kuba ngumhlaba. Ukususela kumasebe amancinci athile, unqumle "izigodo" uze ubambe umbhobho kunye nompu weglue.
I-Master stupa ye-Baba Yaga. Ukwenza oku, faka inkomishi yeplastiki ngaphandle ngegxolo elithambileyo, kwaye ngaphakathi ngaphakathi ngamaqabunga aphuzi.
Glue ukuya ngasezantsi kwendlu (ekhoneni eliphezulu lasekunene lobunjwa) kunye ne-stupa kaBaba Yaga (ekhoneni elingezantsi lasekhohlo).
Ukusuka kwamaconsi amabini e-spruce enza ngezandla zakho i-trunk kunye nentloko ye-Baba Yaga. Ukuba izinwele zisebenzisa intambo ebomvu, amehlo kunye nomlomo unamathele ngeplastiki. Mbophe umloyi ekhanda ngentloko. Beka umlingiswa kwisitya.
Ukusuka kwesebe kunye negobolondo ye-walnut yenza umthi wokwindla kunye nesidleke. Ukusuka kumaqanda amhlophe aseplastiki kunye nokuwabeka kwisihlamba. Hlela umthi kufuphi nomzi. Hlanganisa amagatsha ngamanzi ashushu kwaye ufefe ngamagqabha ahlambulukileyo.
Ngakolunye uhlangothi lwendlu, fakela ibhentshi yamatye ahlukeneyo. Kukho unakho ukukhokelela umzila ovela kwi-moss.
Kwinqanaba lokugqibela, sasaza iifayile "eziwileyo" yonke indawo. Beka i-chestnuts phantsi komthi kwi-qubu. Gcwalisa ukucoca nge-green moss.
Isandla esenziwe ngesandla esivela kwimpahla yendalo engomxholo othi "I-autumn" ngokweklasi yeklasi kunye nesithombe esilungile! Vumela ukuba yome ngokugqibeleleyo kwaye uyithumele esikolweni.
Iingcweti zezingane ezivela kwiplastiki kunye neeponesi enesihloko esithi "I-autumn" ye-kindergarten: isigaba sokuhamba ngesinyathelo
Ukusebenza ngezinto eziphathekayo, abantwana banamathele kwizinto ezintle, bafunde ngezoqoqosho malunga nokusingqongileyo, basebenzise ukukhusela izityalo eziphilayo kwiintshatyalazo ezingenanto. Iimpawu zezobugcisa zezingane ezenziwe ngeplastiki kunye neeponesi kwimixholo ethi "I-autumn" iya kuba ngabantwana umzekelo ocacileyo wokonyango olufanelekileyo lwezipho zekwindla. Abalinganiswa abanomdla kunye namabakala angathobeliyo bahlobisa i-window-show yemiboniso yesikolo yeeholide ekwindla. Into ephambili ukuqokelela izinto ngexesha kwaye unike ixesha elincinane kwinkqubo yokucwangcisa.
Izinto eziphathekayo kwiklasi yeklasi yezobugcisa zezingane kwi-intanethi "I-autumn" ye-kindergarten
iipini kunye neepruce
amasebe omile anomlinganiselo ukusuka ku-1 ukuya ku-5 mm
iiplastiki ezinemibala eyahlukileyo
ummese kunye neesikisi
Umyalelo wesinyathelo-nge-nyathelo kwiklasi yeklasi yezandla zekwindla yabantwana ezenziwe ngamacon and plasticin ngezandla zabo
Qala ukwenza i-hedgehog evela entloko. Ukwenza oku, thabatha i-spruce cone yesayizi encinci. Ukusuka kwiplastiki ye-blue, roll eyes Ebomdaka - impumlo. Ungalibali i-tab ebomvu. Namathisela onke amanqaku entloko.
Emva koko thabatha i-pine cone evulekile kwaye uyixhomeke entloko. Ngaloo ndlela i-hedgehog iya kuba ne-torso ezinaliti.
Ekubeni ii-hedgehogs zifutshane, ziqhekeza iinqununu ezi-4 zincinci elincinci nganye 1-2 cm.
Kwi-trunk ye-hedgehog, fakela iingcezu ezine zeplastiki.
Gcoba iinyawo kwi-trunk ye-hedgehog, ngokucinezela ngamandla ngeeplastiki.
Yenza ukwakheka kobunjwa. Ukudala imvelo yasendle, ubeke amaqabunga aphuzi emithi kwikhadi lekhadibhodi, faka iintyatyambo kunye namaqhina ndawonye ngecala, ubeke i-hedgehog uze uyifake ngokukhawuleza ngeqabunga elikwindla.
Iingcweti zezingane ezenziwe ngeplastiki kunye neenkonkqo kwimixholo ethi "I-autumn" yeklasi yokuhamba ngesinyathelo isilungele!
Imisebenzi emihle kwimxholo othi "I-autumn" kunye nezandla zabo kwintsimi, iklasi yeklasi kunye nesithombe
Iintsana zeminyaka yobudala zenzelwe imimangaliso. Yenza nomntwana inqaku elenziwe ngesandla elinomxholo othi "I-autumn" ngezandla zakho kwiklasi yethu yamatitshala. Qiniseka ukuba "idolophu yemilingo" yezixhobo zemvelo iya kuvuselela umvelisi wakho kwizinto ezintsha zokufumana nokuphumelela. Ukongezelela, loo mveliso iya kuba "indlu" yangempela kwizityalo zasendlini kunye nobutyebi kwimiboniso yabo ebantwaneni.
Izinto eziphathekayo kwiklasi yeklasi yezandla kwimxholo "I-autumn" ye-kindergarten
Amatye amakhulu ahlukeneyo kunye nobunzima
umhlaba kunye ne-sawdust
i-acorns kunye ne-chestnuts
amasebe kunye neentonga
iibhola zokuhlobisa ngeglasi
i-ladybugs zokuhlobisa kwiVelcro
Umyalelo wesinyathelo-nge-nyathelo kwiklasi yeekhrikhi kwimxholo "I-autumn" engadini kunye nezandla zabo
Lungiselela imbiza enkulu yeentyatyambo. Gcwalisa ngomhlaba we-cacti kwaye utshale izityalo ezincinci, uzibeke ngokukhawuleza emacaleni. Emva koko gcwalisa ilizwe nge-sawdust uze ufakele amatye amakhulu amatye-isiseko sekhaya elizayo.
Elinye ilitye elikhulu elinemibala ephahleni epeyinti ngemibala eyahlukileyo, udwebe kwiindonga ifestile, isangci kunye neengcango. Beka indlu kwisiseko.
Qinisekisa ukuba i-cacti ayisondelene kakhulu nezinto ze-autumn yakho. Zama ukuzinciphisa ngezandla zakho ezona zihlalo ezikhulu.
Kujikeleza izityalo zenza iintambo ezincinci zokucokisa kwiindawo ezincinci. Iibhanqa zamatye asemgangathweni ofanelekileyo zisetyenziselwa ukudala ithebula lomlingo. Ukufakela phambi kwendlu, beka ngaphaya nangaphezulu kweebhola zeglasi ezihombisayo.
Ukusuka kwimifino (skewers) kunye nentambo, gubha ibhentshi. Ukusebenzisa iintonga kunye neengubo ezivela kwi-acorns, yenza i-mushrooms enkulu. Beka udidi phakathi kwezityalo ezityalwe kwi-craft.
I-Kashtanchik ukuya emkhatsini wombala ophuzi, usekwe kwiplastiki "umlenze." Fungus i-autumn. Namathisela iqabunga eliphuzi kunye ne-ladybug evela phezulu.
Qaphela ukuba isityalo ngasinye kwisixhobo sakho sekwindla sihlukaniswe nabanye ngocingo olulungisiweyo olwenziwa ngamaqabunga, amacwecwe okanye imifuno.
Ukususela kwintambo eseleyo, yenza uhlobo lwakho lwesitrato sesitalato. Yifake kufuphi nendlu. Uya kunika i-autumn craft ifudumele kwaye iyakhuthuzela.
Yenza ekupheleni zonke iinkcukacha: gcoba ibhakethi elincinci le-foil eliqinileyo, glue apho i-ladybugs iyadingeka khona, ihlakaze ngokungapheliyo amaqabunga.
Inqaku elenziwe ngesandla eselungileyo ngomxholo othi "I-autumn" ngezandla zakho ulungele inkulisa! Ungayithumela kwimbonakaliso ye-autumn ekwindla, okanye ushiye indlu ukuze uvule umntwana.
Izandla nge "Autumn" ngezandla zabo - kuyamnandi kwaye kuyonwaba kubo bobabini kunye nabantu abadala. Iimpawu zendalo zasekwindla zesikolo kunye ne-kindergarten zenziwe kwizinto ezibonakalayo eziqokelelwa ngexesha lokuhamba epakini. Amaqabunga, amagatsha, amanqatha, i-acorns, i-pebble, imifuno, i-plastiki kunye nezinye izinto ziya kulungeleka kule nkqubo. Kodwa kubalulekile ukukhetha iklasi yekhwalithi esemgangathweni kwiifoto kunye namavidiyo. Siyathemba ukuba izifundo zethu ekudaleni ingcweti enomxholo othi "I-autumn" iya kukukholisa!
I-Tilda - iifom zezilwanyana ezipheleleyo
Faka isicelo kwisithambiso sabantwana
Amacwecwe amahle avela kumacandelo e-rubber kumatshini kwaye ngaphandle kwayo, imiyalelo enezithombe ezithatha ngeyinyathelo kunye namavidiyo
Indlela yokudweba indawo kunye ne-watercolor, i-gouache, iipende kwiinkanki - iiklasi zokufundisa abantwana, abaqalayo-Izifundo zokudweba ngesihloko sendawo kunye namapensela
Ukuqala kwabantwana: amabhonkco amahle
Ukulinda izipho, okanye indlela yokwenza iisokisi zonyaka omtsha ngezandla zabo
Ukuxhuma i-plaid kwintsana
Isaladi e-spicy ne-avocado kunye ne-tomato
Ijuba lekhishi kunye nezibonelelo zayo
Ice cream kwi-blueberry ne-currant ebomvu
AmaSandwich nge sausages kunye ne-sauerkraut
Ioli yohlaza kwintwana
UDmitry Peskov wathatha iTrudovik, ifoto
Indlela yokuqala ukuthukuthela umntwana
Kutheni umntu etshintsha
Kutheni intombazana ifuna ukwenza tattoo?
Ungayifundisa njani umntu ukukunceda?